Kọlụm Drilling Machine Manufacturers & Suppliers | China Kọlụm Drilling Machine Factory
Box Kọlụm Drilling Machine ZK5140
Hoton Machinery CNC Drilling Machine ZK5140 na ZK5150 1. Zk5140B na Zk5140B-1 vetikal CNC mkpọpu ala igwe na-eluigwe na ala-egwu machine.the max mkpọpu ala n'obosara bụ 40mm. 2.Zk5150B na Zk5150B-1 vetikal CNC mkpọpu ala igwe na-eluigwe na ala-egwu machine.the max mkpọpu ala n'obosara bụ 50mm. 3. The table nke Zk5140B, Z5150B bụ ofu na The Zk5140B-1, Zk5150B-1 bụ cross table. 4. Nke a igwe ...
Box Kọlụm Drilling Machine ZK5150
Box Kọlụm Drilling Machine Z5163B Z5180B
Square kọlụm vetikal-egwu ala igwe: Square-kọlụm vetikal mkpọpu ala ígwè bụ a eluigwe na ala general-nzube igwe. Ya mee ihe maka counter-emikpu, ịnọ na-eche ihu mkpọpu ala, na ịme ọpịpị, agwụ ike, reaming, wdg The igwe nwere enwetaghị ọrụ nke tap-akpaghị aka reversing ngwaọrụ nke kwesịrị ekwesị maka ịme ọpịpị nke ìsì na kpebisiri oghere. The igwe nwere elu arụmọrụ, elu kpomkwem, ala mkpọtụ, ...
Box Kọlụm Drilling Machine Z5150A
Square kọlụm vetikal-egwu ala igwe atụmatụ: Square-kọlụm vetikal mkpọpu ala ígwè bụ a eluigwe na ala general-nzube igwe. Ya mee ihe maka counter-emikpu, ịnọ na-eche ihu mkpọpu ala, na ịme ọpịpị, agwụ ike, reaming, wdg The igwe nwere enwetaghị ọrụ nke tap-akpaghị aka reversing ngwaọrụ nke kwesịrị ekwesị maka ịme ọpịpị nke ìsì na kpebisiri oghere. The igwe nwere elu arụmọrụ, elu kpomkwem, lo ...
Box Kọlụm Drilling Machine Z5150B-1
Square kọlụm vetikal-egwu ala igwe: 1. The table nke Z5140B, Z5150B bụ ofu na The Z5140B-1, Z5150B-1 bụ cross table. 2. Nke a igwe na-ike enlarge onu, igwu miri emi onu, na ịme ọpịpị, na-agwụ ike na wdg ma e wezụga-egwu onu. 3. Nke a na usoro igwe nwere ọtụtụ uru, dị ka elu arụmọrụ, ezi isiike, elu kpọmkwem, ala mkpọtụ, obosara ọsọ range..the igwe nke nwere cross table, na table nwere ike ...
Box Kọlụm Drilling Machine Z5150B
Box Kọlụm Drilling Machine Z5140B
Square kọlụm vetikal-egwu ala igwe: Square Kọlụm Vetikal Drilling Machine Z5140B Main atụmatụ nke mkpọpu ala igwe 1. Z5140B na Z5140B-1 vetikal mkpọpu ala igwe na-eluigwe na ala-egwu machine.the max mkpọpu ala n'obosara bụ 40mm. 2.Z5150B na Z5150B-1 vetikal mkpọpu ala igwe na-eluigwe na ala-egwu machine.the max mkpọpu ala n'obosara bụ 50mm. 3. The table nke Z5140B, Z5150B bụ ofu na The ...
Box Kọlụm Drilling Machine Z5140B-1
Box Kọlụm Drilling Machine Z5140A
Square kọlụm vetikal-egwu ala igwe Square-kọlụm vetikal mkpọpu ala ígwè bụ a eluigwe na ala general-nzube igwe. Ya mee ihe maka counter-emikpu, ịnọ na-eche ihu mkpọpu ala, na ịme ọpịpị, agwụ ike, reaming, wdg The igwe nwere enwetaghị ọrụ nke tap-akpaghị aka reversing ngwaọrụ nke kwesịrị ekwesị maka ịme ọpịpị nke ìsì na kpebisiri oghere. The igwe nwere elu arụmọrụ, elu kpomkwem, ala mkpọtụ, w ...
Kọlụm Drilling Machine Z5050A
VERTCIAL-egwu ala igwe Atụmatụ: The igwe e mere na multi-ọrụ nke mkpọpu ala. Broaching, reaming, ịme ọpịpị na ihu-egwe ọka. Na a ike ike nke na-egwu ala ya na-enye ohere workpieces ka gbapuru na ibu nso nke size. O kwesịrị ekwesị ka eji na ma mmepụta na mmezi ụlọ ahịa 1. Easy ọrụ. 2. Nkedo ígwè Ọdịdị maka ogologo anwụ ngwa ngwa. 3. Kọlụm ụdị ...
Kọlụm Drilling Machine Z5050
Vetikal gburugburu kọlụm na-egwu ala igwe atụmatụ: 1 .Novel imewe na mara mma ile anya, Ọdịdị nke ahụ ibe, a dịgasị iche iche nke agbanwe ọsọ. 2 .Unique arụ ọrụ table, electric na ntuziaka na-ebuli usoro, mfe iji rụọ ọrụ. 3. tebụl nwere ike bugharia 180 ogo ma ọ bụ 45 degrees, na ọ ga-eji maka a dịgasị iche iche nke ngwa. 4.The a na-nyere na a jụrụ na ngwaọrụ na ịme ọpịpị ngwaọrụ. 5 ...
Kọlụm Drilling Machine Z5032C
Vetikal-egwu ala igwe onyinye eji table na ọnụ ọgụgụ na kemeghi akwụsị maka ahazi-egwu na ìhè-egwe ọka ọrụ Jụụ ọrụ mmanụ-bath lubricated Kwadobe maka ogologo ngwá ọrụ ndụ na anwụ ngwa ngwa The igwe si elu-edu spindle amị nwere ike idi elu ibu maka ogologo okwu Manual malite ịgba oriri nwere ike Switched elu-nkenke oriri via a aka-wheel cont ...
Kọlụm Drilling Machine Z5040C
Kọlụm Drilling Machine Z5045C
Kọlụm Drilling Machine Z5040 / 1
Kọlụm Drilling Machine Z5045 / 1
Kọlụm Drilling Machine Z5032 / 1
Kọlụm Drilling Machine Z5045
Kọlụm Drilling Machine Z5040A
Atụmatụ: The igwe e mere na multi-ọrụ nke mkpọpu ala. Broaching, reaming, ịme ọpịpị na ihu-egwe ọka. Na a ike ike nke na-egwu ala ya na-enye ohere workpieces ka gbapuru na ibu nso nke size. O kwesịrị ekwesị ka eji na ma mmepụta na mmezi ụlọ ahịa 1. Easy ọrụ. 2. Nkedo ígwè Ọdịdị maka ogologo anwụ ngwa ngwa. 3. Kọlụm ụdị vetikal mkpọpu ala igwe ...
Kọlụm Drilling Machine Z5040
Mpempe akwụkwọ Metal Machines, -Egwe ọka Drilling Machine , lathe , Metal lathe , ekwe Machine , lathe Machine ,